40 ISIDLO SOKUGQIBELA SETATTOO UYILO LWAMADODA-IZIMVO ZAMAKHRISTU NGE-INK - UHLOBO
40 Isidlo sokugqibela seTattoo Uyilo lwaMadoda-Izimvo zamaKhristu nge-Ink
Ubugcisa bomzimba kunye nenkolo ziye zafikelela kubudlelane obugqibeleleyo! Enkosi kumlingo omangalisayo weeTattoo zeSidlo Sokugqibela, abafana abangamaKristu banokubonisa elinye icala ngelixa bethatha inxaxheba kumdlalo osisigxina wokomoya.
Ukufana kukaYesu Krestu kuyakuhlala kuthandwa kwiindawo ze tattoo, kodwa akukho sicwangciso sibandakanya unqulo ngaphezu kwe-Ekaristi. Akukho liso liya kuba nakho ukudlula kwesi sikhumbuzo sizukileyo sePasika.
Ngokufumana imbonakalo yeSidlo seNkosi, ungajika ulusu lwakho lube ngumthandazo ongapheliyo. Ukunqunyulwa kunokubangela ukuba ubukhoboka kuKristu kwezinye izithethe zamaKatolika, ke oko kunokuba sisitshixo kusindiso lwakho kunye nokuhlengwa. Ngokuwenza lo mfanekiso ubonakalayo ngalo lonke ixesha, uya kuba uphethe isikhumbuzi esingayeki sokholo lwakho.
Ngapha koko, umbono oqaqambileyo unokuphakamisa uThixo nakwabanye ababukeleyo. Ke, i-tattoo yeSidlo sokugqibela enomdla ngokuzenzekelayo iya kukwenza ube ngomnye wabathunywa bakaKristu.
Izicatshulwa ezivela kwabaseKorinte zikwadityaniswa ngamanye amaxesha ukwenza umyalezo wokuphilisa ucace gca. Ukuba ufuna ukuziva uthando lukaKrestu ngalo lonke ixesha, ngoko ke akukho sizathu sokoqobo. INkosi inceda abo bazincedayo, ke zincedise kule datha yeklasi yoyilo lweSidlo sokugqibela sasezulwini.
1. Ingalo yokuGqibela yeTattoos yeSidlo sangokuhlwa
Yimalini itattoo yemikhono epheleleyo
zokuzonwabisa zamadoda kwi20s yazo
2. IiTattoos zeSidlo sokugqibela seBicep
3. IiTattoos zesidlo sangokuhlwa sokugqibela
wavuka umvambo esandleni esincinci
4. IiTattoos zesidlo sokugqibela esifubeni
5. Ukubuyela Umva Isidlo sokugqibela iiTattoos
6. IiTattoos zesidlo sangokuhlwa sokugqibela esiswini
7. Iitattoos zeSidlo sokugqibela se3D
8. Umlenze wokugqibela iiTattoos
ishawa enendawo yokuhlala
imibono yokuhombisa eludongeni lokuhlala
Imibono yebhedi ebhedini yegumbi elincinci
yiyiphi imibuzo efanelekileyo yokubuza intombi
I-alice kwimibono yeetatland tattoos
izimvo zohlahlo-lwabiwo mali olusezantsi ngasemva kuhlahlo-lwabiwo mali